Masuuliyiinta ONLF oo xaflad loogu sameeyey Hoolka Sayid Maxamed Cabdille Xasan |
Xafladdan oo ay kasoo qeybgaleen masuuliyiinta ONLF iyo kuwa dowlad deegaanka Soomaalida, waxaa qudbado dhaadheer ka jeediyey madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida, mudane Cabdi Maxamuud Cumar, gudoomiyaha xisbiga haya talada dowlad deegaanka Soomaalida ee ESPDP, mudane Cabdifitaax Sheekh Cabdullahi, gudoomiyaha ururka ONLF, Eng. Salaxudiin Cabdiraxman Xaaji Macow, iyo xubno kale.
Madaxweynaha ayaa qudbaddiisa kaga waramay horumarka uu deegaanku gaadhay tan iyo markii xukunka dalka laga tuuray xukumaddii maxeysatada aheyd ee Dergiga. Madaxweyne Cabdi ayaa tilmaamay guulaha kala-duwan ee uu deegaanku ku talaabsaday haddey noqon laheyd dhanka waxbarashada, caafimaadka, biyaha, beeraha, jidadka iyo kaabayaasha kale ee dhaqaale.
Gudoomiyaha xisbiga haya talada dowlad deegaanka Soomaalida ayaa dhankiisa sheegay in wadahadalka u socda dowladda iyo garabka nabadda qaatay ee ONLF uu yahay mid hididiile galinaya ololaha horumar iyo nabadgalyo ee ay dowladda ka wado deegaanka Soomaalida. Mudane Cabdifitaax ayaa sheegay inay dowladda ka go’an-tahay nabadda deegaanka Soomaalida, wuxuuna mahad ballaadhan u jeediyey ururrada nabadda qaatay.
Gudoomiyaha ururka ONLF oo goobta ka hadlay ayaa isna sheegay inuu aad ula dhacsan yahay horumarka ballaadhan ee uu deegaanka ku talaabsaday, wuxuuna ballan qaaday inuu ururkiisu doorka kaga aadan ka cayaari doono sii xoojinta ololaha horumar ee ay dowaldda ka wado deegaanka Soomaalida, isagoo raacaya dastuurka dalka u yaal.
Masuuliyiinta ONLF ayaa la filayaa inay u ambabaxaan gobolka Qoraxay, halkaa oo ay ku qabsan doonaan shirar u gaadh ah, markaa kadib ayaa la rajeynayaa inay dowladda iyo iyaga wada saxiixaan hashiis kama-danbeys ah.
Xafiska Wararka Shabakada Wararka ee nogob news jigjiga madaale